(၁)ပွဲကို(၁)ထောင်ကျပ်သာပေးရပြီး ရှယ်မုန့်တီအရသာခံစားနိုင်မယ့် ရွှေသိရွှေဘိုမုန့်တီဆိုင် – FoodiesNavi
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစားအသောက်ကောင်းတွေ ပေါများတဲ့နေရာတွေထဲမှာ လှည်းတန်းလည်းအပါအဝင်ပါ။ လှည်းတန်းနားကိုနေ့တိုင်းဖြတ်သွားနေပေမယ့် စားသောက်ဆိုင်တွေများလွန်းလို့ ဘယ်ဆိုင်သွားစားကြည့်ရမလဲ အကြံအိုက်နေရင်တော့ လှည်းတန်းဗဟိုလမ်းက ” ရွှေသိရွှေဘို ” မုန့်တီလေးသွားစားကြည့်နော် ။ (၁)ပွဲကို(၁)ထောင်ပဲပေးရတယ်။ (၁)ထောင်လို့မထင်ရအောင်ကို အရသာကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။
အသုပ်မှာအဓိကကျတာက ပဲမှုန့်ပါပဲ။ ရွှေသိရွှေဘိုကပဲမှုန့်က တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ ? အာ့တော့အသုပ်တိုင်းကပဲမှုန့်နံ့လေးမွှေးပြီး ဆိမ့်နေတာပဲ။ ပဲမှုန့်ကြီးပဲဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း (၁)ထုပ်ကို(၅၀၀)နဲ့ဝယ်လို့ရသေးတယ်။ မတ်ပဲကြော်လေးလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ အသုပ်လေးနဲ့တွဲစားလိုက်ရင် ပိုလို့တောင်ကောင်းသေး ? တစ်ခုကို(၁)ရာပဲပေးရတယ်။ ပဲအရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးကို မွမွလေးကြော်ပေးထားတာစားလို့အရမ်းကောင်းပဲ ? နန်းကြီးသုပ် ၊ နန်းပြားသုပ် ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲတွေလည်းရနိုင်သေးတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော်တော်ကြီးတန်တော့ ဘတ်ဂျတ်တွက်နေစရာမလိုဘဲ လွှတ်စားလို့ရပြီလေ ? အရသာကလည်းရှယ်ကောင်း ? လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတော့ ပိုလို့တောင်စိတ်တိုင်းကျသေး ? လှည်းတန်းရောက်ဖြစ်ရင်တော့ သွားစားကြည့်ပြီးအရသာလေးတွေ ဝေဖန်ပေးကြပါဦးအစားတစ်လိုင်းတို့ရေ ? ဆိုင်လိပ်စာအပြည့်အစုံကတော့ အမှတ်(၂၃) ၊ လှည်းတန်းဗဟိုလမ်း ၊ ခိုင်ရွှေဝါကားမှတ်တိုင်အနီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?
Image Source : www.facebook.com/deliciousfoodsplacesyouvisited
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ကိတ်မုန့်လေးတွေမှာယူပြီး အံ့သြဖွယ်ရာတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့……